नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा ~ Banking Khabar
राजनराज पन्त, अध्यक्ष, आइटी सर्ट
मुलुकमा थुप्रै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आ–आफ्नै साइबर सुरक्षा नीति हुन्छन् । त्यस्तै, प्रविधि हेर्ने कर्मचारीको ज्ञान र अनुभव पनि फरक–फरक हुन्छन् । यसर्थ, यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षाका मामलामा हातेमालो गर्नुपर्छ । एक–अर्काको ज्ञान र अनुभवलाई साटासाट गर्नुपर्छ । अहिले एनआइसीमा कसरी हमला भएको रहेछ ? कसरी समस्याको समाधान गरियो ? कमजोरी के थियो ? अब समस्या नओस् भनेर एनआइसीले के ग¥यो ? यस्ता अनुभव एनआइसीले अन्य बैंकसँग साटासाट गर्नुपर्छ । अन्य बैंकले पनि सिक्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित यो लेख वित्तीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण सन्देश हुने भएकाले साभार गरिएको हो । (सम्पादक)